China Heavy Wall Steel Pipe orinasa mpamokatra sy mpamatsy | XUANZE
Ny fizotry ny famokarana sy ny famokarana fantsom-by vy tsy mitongilana amin'ny rindrina mavesatra dia azo zaraina amin'ny sary mangatsiaka, ny hatsiaka mangatsiaka, ny fikotrana mafana ary ny fanitarana mafana. Ny fitaovan'ny fantsom-by dia 10, 20, 35 ary 45, izay antsoina hoe fantsom-by tsotra. Araka ny fampiharana, azo zaraina ho fantsom-by vy tsy misy fantsona, fantsom-by tsy misy vy ho an'ny fitaterana, fantsom-by vy tsy misy fangarony ho an'ny vinaingitra, fantsona vy tsy misy tohana ho an'ny vinaingitra, fantsona vy tsy misy fangarony avo lenta ho an'ny fitaovana zezika simika ary vy mirindra ho an'ny fantsona fandavahana geolojika; fantsona vy tsy misy fangarony ho an'ny fandavahana menaka; fantsona vy tsy misy fangarony ho an'ny famotehana solika; fantsom-by tsy misy vy ho an'ny sambo; fantsom-by tsy misy fangarony mangatsiaka voasintona sy mangatsiaka. fantsona firaka isan-karazany. Ny fantsom-by tsy misy fotony dia ampiasaina indrindra amin'ny fanodinana mekanika, fitrandrahana arintany, vy vy.
Ny akora vita amin'ny fantsom-by vy tsy misy fefy dia boribory boribory. Ny banga boribory boribory dia tapaka amin'ny milina manapaka, ary ny bileta miaraka amin'ny fitomboana manodidina ny 1 m dia alefa any amin'ny lafaoro amin'ny fehikibo conveyor mba hanafanana. Mafana ao anaty lafaoro eo amin'ny lafaoro sahabo ho 1200 degre eo ho eo ilay bileta. Ny solika dia hidrogen na acetylene. Ny fanaraha-maso ny mari-pana ao anaty lafaoro dia olana lehibe iray. Aorian'ny famoahana ny fantsom-boaloboka ao anaty lafaoro dia mila mandalo ilay mpanindrona tsindry izy. Amin'ny ankapobeny, ny mpanindrona mahazatra kokoa dia ny mpanindrona ny cone roll. Ity karazana piercer ity dia manana fahombiazan'ny famokarana avo lenta, kalitaon'ny vokatra tsara, fanitarana savaivony perforation lehibe, ary afaka mitafy naoty vy isan-karazany. Aorian'ny fanindronana, ny bileta boribory dia ahodina miandalana miaraka amin'ny horonan-taratasy telo, mihodina na manintona. Aorian'ny fitrandrahana dia tokony hesorina ny fantsona ho an'ny habe. Ny milina fametahana dia manodina ny boribory boribory ho any amin'ny banga vy amin'ny hafainganam-pandeha hananganana fantsom-by.
Ny savaivony anatiny amin'ny fantsom-by dia voafaritry ny halavan'ny savaivony ivelany amin'ny fantsom-bokon'ny milina fandrefesana. Rehefa vita ny habeny, dia niditra tao amin'ny tilikambo fihenan-tsakafo ny fantsom-by ary natsangan'ny famafazana rano. Aorian'ny fampangatsiahana dia ahitsy ny fantsom-by. Aorian'ny fanitsiana, ny fantsom-by dia alefa any amin'ny detector misy lesoka vy (na fitsapana hydraulic) amin'ny fehikibo conveyor mba hahitana ny lesoka anatiny. Raha misy triatra sy miboiboika ao anatin'ny fantsom-by dia ho hita izany. Aorian'ny fanaraha-maso kalitao ny fantsom-by dia ilaina ny fisafidianana manual tena hentitra. Aorian'ny fizahana kalitaon'ny fantsom-by, ny isa, ny famaritana ary ny isa famokarana dia hofafazana loko. Entina amin'ny crane ao anaty trano fitehirizana.
PIPE STEEL SEAMLESS WALL HEAVY
Manaova akanjo fanoherana ny tena Fandosana simika avo lenta sy karazany isan-karazany
Ny fizotry ny famokarana sy ny famokarana fantsom-by vy tsy mitongilana amin'ny rindrina mavesatra dia azo zaraina amin'ny sary mangatsiaka, ny hatsiaka mangatsiaka, ny fikotrana mafana ary ny fanitarana mafana.
Ny fitaovan'ny fantsom-by dia ASTM 179, A106Gr.B, 1035 ary 1045, izay antsoina hoe fantsom-by vy tsotra.
Ny fitaovan'ny fantsom-by dia ST52, ASTM 5140,440,4135,12XMФ, izay antsoina hoe fantsom-by vy tsotra.
ASTM A106Gr.B firafitry ny simika sy ny toetra mekanika
ASTM 1045 firafitry ny simika sy ny toetra mekanika
ASTM A179 firafitry ny simika sy ny toetra mekanika
Ny hatevin'ny fanamiana
PIPE STEEL TSY MISY MALALAKA IZAO
Previous: Galvanezed seamless Steel Pipe
Manaraka: Sodina mirindra mirindra tsara